ဂျပန်လို့ ပြောရင် ဖူဂျီတောင် နဲ့ဆာကူရာပန်းပါ။
ဒီတခါ ဒီနှစ်ခုကို တစ်ကြိမ်တည်းမှာ ပျော်ရွင်ခံစားနိုင်မယ့် နေရာ ၆ခုကို မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။
၁.အာရခုရယာမအာစမပန်းခြံ ( ယာမာနာရှီခရိုင် )
လုံးဝ နာမည်ကြီးဖြစ်တာက ဒီနေရာပါ။ ထိုင်းလူမျိုး အင်တာနက်မှ မိတ်ဆက်ပေးသူကြောင့် ကျော်ကြားသွားပြီး နိုင်ငံခြားခရီးသွားဧည့်သည်များ ဝင်ရောက်လည်ပတ်ကြပါတယ်။
အဲဒီပုံရိပ်ကို ရိုက်ထားတဲ့နေရာက ဒီမှာ > http://jp.zekkeijapan.com/spot/shoot/517/2933/
လမ်းကြောင်း ：ဖူဂျီယာမအထူးအမြန်လိုင်း ရှီမို့ ယော်ရှိဒဘူတာ မှ ၁၅ မိနစ် လမ်းလျှောက်။ တောင်တက်ခရီးဖြစ်ပါတယ်။
၂. ခါဝါဂူချိရေကန် ( ယာမာနာရှီခရိုင် )
အနီးဝန်းကျင်မှာ စတိုင်ကျတဲ့ စားသောက်ဆိုင်၊ ဈေးဆိုင်၊ ပြတိုက်တွေ ရှိပြီး ခရီးသွားဧည့်သည်တွေ လည်ပတ်နိုင်ပါတယ်။
အဲဒီပုံရိပ်ကို ရိုက်ထားတဲ့နေရာက ဒီမှာ >http://jp.zekkeijapan.com/spot/shoot/45/375/
အချိန်： ဧပြီလ အလယ်
လမ်းကြောင်း：ခါဝါဂူချိခိုဘူတာ မှ ဖူဂျီအထူးဘတ်စ်ကား ( စာနီးဒဲ အရှေ့) ဆင်း ၊ နာဂစခိလှိုဏ်ခေါင်းဘေးလမ်း ဝင်တာနဲ့ ချက်ချင်းရောက်သည်။
3.ဆိုင်းခိုအီယာရှိနိုဆတိုးအိမ်စု ( ယာမာနာရှီခရိုင် )
အလုံး ၂၀ ခန့် ရှိတဲ့ သက်ကယ်မိုးအိမ်လေးတွေကို နဂိုပကတိအတိုင်း ဆောက်လုပ်ထားပြီး အဆောက်အဦးဟောင်းလေး နဲ့ ဖူဂျီတောင် နဲ့ ဆာကူရာပန်းတွေရဲ့ ခမ်းနားတဲ့မြင်ကွင်းကို ခံစားကြည်နူးနိုင်ပါတယ်။
အချိန်：ဧပြီလ အစ မှ ဧပြီလ လယ်ထိ
လမ်းကြောင်း ：ခါဝါခူဂျီခိုဘူတာ မှ လယ်တိုရိုဘတ်စ်ကားဖြင့် ၅၀ မိနစ်
အသေးစိတ် ： http://jp.zekkeijapan.com/spot/index/602/
၄. တာနုခိရေကန် ( ရှိဇုအိုကခရိုင် )
ရေကန်ပတ်လည်မှာ စက်ဘီးစီးရန် လမ်းရှိတာကြောင့် စက်ဘီးငှားဆိုင်မှာ ငှားပြီး လည်ပတ်စီးကြရအောင်နော်။
လမ်းကြောင်： ဖူဂျီနိုမီယဘူတာ မှ ဘတ်စ်ကား ( ခရူးကရွာ သွားသော ) ဖြင့် ၄၅ မိနစ် ( တာနုခိရေကန် စခန်းနေရာ ) ဆင်း
၅. အိုရှီနိုဟတ်ကိုင်း ( ယာမာနာရှီခရိုင် )
ရှင်းနရှောမြစ်တလျှောက် စိုမဲအိယောရှိနိုဆာကူရာပန်းနဲ့ စုအိဆမ်ပန်းတို့ပွင့်ပြီး ဖူဂျီတောင်ကို ချစ်စရာကောင်းအောင် ကာရံညီနေတာက ကြည်နူးစရာကောင်းပါတယ်။ ညအခါ မီးထွန်းအလှဆင်ထားပါတယ်။
အချိန်：ဧပြီလ အလယ်မှ အကုန်
လမ်းကြောင်း ：( ဖူဂျီယာမဘူတာ ) မှ ရိုစမ်းဘတ်စ်ကား နာဂါနိုသွားတဲ့ ကားကို စီးပြီး ၊ ( အီရှီနိုဟတ်ကိုင်းဝင်ပေါက် ) မှတ်တိုင် ဆင်း။
၆. ဖူဂျီဗြူးဟိုတယ် ( ယာမာနာရှီခရိုင် )
ခါဝါခုချိရေကန်ဟိုတယ် အနေဖြင့် ကြာရှည်တည်ရှိခဲ့သည်။ သက်တမ်း ၈၀ ကျော်ရှိတဲ့ ရှိဒရယ်ဆာကူရာ ၊ ယအဲဆာကူရာ၊ စိုမဲယောရှိနိုဆာကူရာ၊ ဖူဂျီဆာကူရာ စတာတွေကို မြင်တွေ့ ခံစားနိုင်ပါတယ်။ ဖျော်ဖြေပွဲ နဲ့ လက်ဖက်ရည်ပွဲလို့ ပြောကြတဲ့ပွဲတော်လည်း ကျင်းပပါတယ်။
အချိန်： ဧပြီလ အစ မှ ဧပြီလ အလယ်ထိ
လမ်းကြောင်း： ( ခါဝါခုရှိခိုဘူတာ ) မှ အငှားကားဖြင့် ၁၀ မိနစ်၊ တည်းခိုနေရာက ( ခါဝါခုရှိခိုဘူတာ ) မှ အခမဲ့ဘတ်စ်ကား ထွက်သည်။
အထက်ပါ ဆာကူရာနဲ့ ဖူဂျီတောင်ရဲ့ အကောင်းဆုံးနေရာ။